हिमालयन बैंकको अठ्ठाइसौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न - Aathikbazarnews.com हिमालयन बैंकको अठ्ठाइसौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न -
creative writing worksheets for grade one creative writing websites for students critical thinking model help us identify personal morals collins homework help french creative writing look at the picture and writeastory study creative writing in france correct order in writing the research paper ocad creative writing fsu creative writing ranking mba dissertation writing services uk gcse english creative writing techniques year2creative writing lesson film production and creative writing university of wisconsin milwaukee creative writing phd ecu creative writing major sports creative writing creative writing describing an audience price elasticity of demand case study analysis essay for sale social studies homework helper homework help 4-6 will writing service weybridge hardy custom engraving case study moral obligation to help others essay australian assignment writing service zoom in vocabulary for creative writing university of calgary continuing education creative writing oxford university creative writing online significato di do your homework creative writing executive
हिमालयन बैंक लिमिटेडको अठ्ठाइसौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भयो ।
सोमबार सम्पन्न साधारण सभाले शेयरधनीहरुलाई १४ प्रतिशत बोनस शेयर र ६ प्रतिशत नगद लाभांश (कर सहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यो बोनस शेयरको वितरण पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी रु. १० अर्ब ६८ करोड ४४ लाख ८ सय २८ पुग्ने छ।
सभामा संचालक समितिको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । ग्राहकवर्गले बैंक प्रति गरेको विश्वास तथा व्यवस्थापनको सृजनात्मक क्रियाशीलताबाट बैंकले निरन्तर प्रगति गरिरहेको जानकारी गराइयो ।
यसका साथै २८ वर्ष देखि निरन्तर सेवारत हिमालयन बैंक नेपालको वित्तिय क्षेत्रको अग्रणी मध्येको सुरक्षित र भरपर्दो बैंक भएको तथा नवीन, सुरक्षित तथा अत्याधुनिक बैंकिङ्ग प्रणालीको विकास गर्दै जनताको विश्वास अनुरुप अझ सुलभ तथा स्तरीय सेवा पुर्याउने लक्ष्यमा बैंक सदा झैं प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा सभा समक्ष व्यक्त गरियो।
हाल, बैंकले देशभर ७० शाखा, ४ विस्तारित काउन्टर, १४६ ब्त्ः र ४२०० भन्दा बढी एइक् त्भचmष्लबकि संख्या बाट सेवा प्रदान गर्दै आएकोे छ । समीक्षा अवधिमा निक्षेप अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६.६० प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १ खर्ब ३१ अर्ब ८६ करोड ३ लाख पुगेको छ । कर्जा सापट ९.२५ प्रतिशतले बढ्न गई रु. १ खर्ब ७ अर्ब २९ करोड ४८ लाख पुगेको छ । यस अबधिमा बैंकको निष्कृय कर्जा १.०१ प्रतिशतमा सिमित गरिएको छ। कोभिड महामारीको बिच पनि बैंकको समग्र वित्तिय अवस्थाको प्रगतिप्रति शेयरधनी महानुभावहरु सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो।
कोभिड—१९को महामारीको कारण नेपाल सरकारद्वारा जारी स्वस्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्दै भिडियो कन्फ्रेन्सको माध्यमबाट साधारणसभा गरिएको थियो ।
कोरोना भाइरसको त्रास चीनबाहिर पनि फैलिने
लकडाउनमा बढदो असंतोष र सरकारले चाल्न नसकेको कदमहरु
कुमारी बैंक र हेरिटेज होटेल बीच सम्झौता
भरतपुरको कोरोना अस्पतालमा अख्तियारको छापा भिडियो सहित